Australia Awards Scholarships Yangon | ShweBiz.com
Australia Awards Scholarships Yangon
ရန်ကုန်က ဩစတြေးလျပညာသင်ဆု လျှောက်မယ့်သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ လာမယ့် စနေနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရက် မှာ ပညာသင်ဆုအကြောင်း ဟောပြောပွဲကို Sedona ဟိုတယ် မင်းတုန်း ခန်းမမှာကျင်းပမှာပါ။ Scholarship ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများက ဩစတြေးလျပညာသင်ဆုအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိဖို့ မျှဝေပေးရင်းနဲ့ မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးဖို့ ရှိနေပါမယ်။
ရန်ကုန် စနေနေ့ ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ
နေ့လည် ၂ နာရီ – ၄ နာရီ
Sedona Hotel, မင်းတုန်း ခန်းမ
Calling interested #AustraliaAwards applicants in Yangon! Come and join us at the Sedona Hotel in Yangon on Saturday 22 February. There you can learn more about the Australia Awards scholarships and have your questions answered by our scholarships team.
Yangon: Saturday 22nd February
2pm-4 pm at Sedona Hotel
For more information on Australia Awards scholarships in Myanmar : https://myanmar.embassy.gov.au/files/rang/australia%20awards%20myanmar%202021%20country%20profile.pdf?fbclid=IwAR3x_C5o7FKkP83Hh9Q2CuzejSUwfeW6FsQuXSRj6Rn9LKQdDKLDq3Hrqas
Related Article: Australia Awards Scholarship များအကြောင်းသိကောင်းစရာ http://www.shwebiz.com/austalia-awards-scholarships/